खोज इन्जिनको लागि तपाईंको वेबसाइट को अनुकूलन गर्दा के लागी खातामा लाग्न सक्छ?
म तपाईलाई केहि कुरा बताउनेछु जुन तपाईं खोज इंजन अनुकूलन महत्वको बारेमा थाहा छैन. आजकल, लगभग कुनै पनि जसले डिजिटल बजारमा काम गर्छ भनेर थाहा पाउँछ कि एसईओ कसरी आफ्नो व्यवसाय सुधार गर्न सक्छ. तथापि, जब यो वास्तविक अभ्यासको लागी, सिद्धान्त होइन, केहि उद्यमहरू त्यहाँ जानकारी को मात्रा को कारण निराश हुन सक्छ र तिनीहरूले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न को लागी तरिकाहरु लाई लागू गर्नु पर्छ। - купить автомойку в таллинне.
त्यहाँ एसईओ गाइडहरू, पुस्तकहरू, र ट्यूटोरियलहरू छन् जो प्रबुद्ध हुन सक्छन्. तथापि, तिनीहरूमध्ये धेरैजसो भारी र भ्रामक छन्. त्यसैले उनीहरूले सही दिशामा उनीहरूलाई छाडेर गैर-पेशेवर वेबसाइट मालिकहरूलाई भ्रामक बनाउन सक्दछन्. आज, हामी खोज इन्जिन को लागि आफ्नो वेबसाइट को अनुकूलन शुरू गर्न को लागि केहि आसान चीजहरु को बारे मा कुरा गर्नेछन्.
ओएस-साइट एसईओ आधार
तपाईलाई थाहा छ कि खोज इञ्जिनका लागि सबै भन्दा आवश्यक तत्वहरू तपाईको साइटमा राखिएको छ, र तपाई तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुनेछ।. अफ-साइट अप्टिमाइजेशन सेवाहरू कुशल साइट-साइट अनुकूलन बिना कुशल हुनेछैन. तथापि, साइटमा अप्टिमाइजेसनको लागि एक महत्वपूर्ण नियम होईन तपाईले यसलाई अधिक गर्नु हुँदैन किनभने खोजी इन्जिनले तपाईंलाई धोका दिने गर्दछन्।. उदाहरणको लागि, यो तपाईंको पृष्ठमा सम्भवतः खोजशब्दहरू राख्न को लागी लक्ष्य हुनु हुँदैन. तपाईंले सहि स्थानहरूमा धेरै सान्दर्भिक खोज सर्तहरूको सही नम्बर राख्नु आवश्यक छ. यो साइट खोज इन्जिन अनुकूलन को सबै भन्दा महत्वपूर्ण मूल्य हो.
सबै भन्दा पहिले, तपाईंलाई आफैलाई वा व्यावसायिक एसईओ विशेषज्ञहरूको सहयोगको साथ एक व्यापक खोजशब्द अनुसन्धान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ. यो प्रभावकारी गर्न को लागी, तपाईंलाई पहिले एक बजार आला अनुसंधान र प्रतियोगी विश्लेषण गर्नु पर्छ. यसले तपाइँलाई खोजशब्दहरूको धारणा दिनेछ जुन तपाइँको वेबसाइटमा पूर्ण रूपमा मेल खानेछ. सबैभन्दा सान्दर्भिक र लक्षित खोजी सर्तहरूको सूची बनाउनको लागी, सेल्टल्ट ओटो एसईओ जस्तै अनलाइन अनुकूलन उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्. यसले तपाईंलाई सही सुझाव दिन्छ र खोजशब्द अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सरल बनाउनेछ.
अन-पृष्ठ अप्टिमाइजेसनको दोस्रो चरणमा, तपाईले आफ्नो खोजी सर्तहरूसँग तपाइँको सामग्रीमा सही तरिकाले घुसाउन आवश्यक छ जस्तै कि खोज बटहरू सजिलै आफ्नो साइट पार्स गर्नेछ र एसईपी मा आफ्नो संभावित ग्राहकहरु लाई देखाउँदछ।. यही कारणले तपाइँलाई ग्राहकहरू को लागि पूर्वावलोकनको रूपमा सेवा गरिरहेका छन् र शीर्षकहरू र मेटा विवरणहरूमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिन आवश्यक छ र तपाईंको पृष्ठहरू कुन बारे मा केहि जानकारी दिन्छन्।.
यदि तपाईंको साइट वर्डप्रेस सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा आधारित छ भने तपाई भाग्यशाली हुनुहुन्छ. तपाईंको काम सजिलो बनाउन थुप्रै प्लग इनहरू छन्.
यसबाहेक, तपाइँलाई निम्न अनुकूलन प्रविधिहरू लागू गर्न आवश्यक छ तपाईको वेबसाइटको सामाग्रीमा तपाईको साइट खोजी इन्जिन जस्तै गुगल, Bing वा Yahoo को अनुकूलन गर्न।.
बाह्य लिंकिंग को तुलना मा आन्तरिक साइट लिंकिंग कम महत्वपूर्ण छैन. तपाईले खोज्नका लागि क्रलरहरू तपाईंको वेबसाइटमा तपाईंको साइटको अन्य पृष्ठहरूमा अन्य लिङ्कहरू लिङ्क गरेर आफ्नो वेबसाइट पार्स गर्न मद्दत गर्दछ. यसबाहेक, यो तपाईंको साइटमा प्रयोगकर्ता अनुभवलाई सुधार गर्दछ उनीहरूले एक साइट सेन्टरबाट अर्को कुनै पनि कठिनाइ बिना कुनै एक ठाउँमा जाने मौका पाउँछन्.
तपाईंको सामग्री ढाँचा सुधार गर्न, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ विभिन्न स्तरको हेडर ट्याग प्रयोग गर्नुहोस्।. यसले खोज इन्जिनहरूलाई सामग्रीको प्रत्येक खण्डको बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ. मुख्य शीर्षकका लागि H1 ट्यागहरू प्रयोग गरिन्छ. यहाँ तपाईंले आफ्नो लेख छोटो र आकर्षक बाटोको बारेमा के भन्न चाहनु पर्छ. यसबाहेक, तपाइँ उपशीर्षकहरूको लागि H2 र H3 ट्याग प्रयोग गर्न आवश्यक छ. यसले Google बोट्स र पाठकहरू दुवैलाई तपाईंको सामग्री को पाचन योग्य वर्गहरूमा तोड्न मद्दत गर्नेछ.